Storm Glass: यो के हो, यो के को लागि हो र तपाईं कसरी मौसम भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 11/11/2021 10:01 | Divulgation
मानिस सधैं मौसमको भविष्यवाणी कसरी गर्ने भनेर जान्न चाहन्छ। त्यहाँ धेरै आविष्कारहरू छन् जुन यसको भविष्यवाणी गर्ने प्रयास गर्न सिर्जना गरिएको छ। ती मध्ये एक हो तूफान ग्लास। यसलाई तूफान क्रिस्टलको रूपमा पनि चिनिन्छ र यो मौसमको भविष्यवाणी गर्न प्रयोग गरिने जिज्ञासु उपकरण हो। यद्यपि यो मौसम विज्ञानका प्रशंसकहरू बीच मात्र परिचित छ, X लाई पहिले नै नेभिगेटरहरू द्वारा XNUMX औं शताब्दीमा प्रयोग गरिएको थियो।
यस लेखमा हामी तपाईलाई Storm Glass के हो, यसको विशेषताहरू के हुन् र यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भनी बताउन गइरहेका छौं।
1 Storm Glass के हो
2 तपाईं कसरी मौसम भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ?
3 Storm Glass को आविष्कारक
4 भविष्यवाणी र व्यवहार
5 कसरी एक तूफान गिलास बनाउने
Storm Glass के हो
यो चाखलाग्दो उपकरण विभिन्न तरल पदार्थहरूको मिश्रणले भरिएको सिल गरिएको गिलास कन्टेनर हो, यी तरल पदार्थहरूले मौसमको अवस्था अनुसार फरक आकार लिन्छन् र छोटो अवधिमा मौसमको भविष्यवाणी गर्न सक्छन्। यो मिश्रण को मुख्य घटक तिनीहरू आसुत पानी र इथेनॉल हुन्। यसमा थोरै मात्रामा पोटासियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड र कपूर पनि पाइन्छ। तपाईंले मिश्रणको क्रमसँग सावधान रहनु पर्छ, किनभने यदि थप अर्को क्रममा बनाइयो भने, यो विस्फोट हुन्छ।
तपाईं कसरी मौसम भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ?
हावाको तापक्रम र वायुमण्डलीय दबावमा परिवर्तनले मिश्रणको घुलनशीलतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसले तरलको उपस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। Fitzroy द्वारा स्थापित अधिक वा कम टर्बिडिटी वा तराजू, क्रिस्टलाइट वा फिलामेन्टस संरचनाहरूको उपस्थिति वा अनुपस्थिति यो अर्को केही घण्टाको लागि समय अनुसार परिवर्तन हुन्छ। एक स्पष्ट तरल, अशुद्धता बिना, नीलो आकाश र घमाइलो वातावरण को एक सूचक हो, र यदि यो बादल सुरु हुन्छ, यो बादल मा परिणत हुनेछ र पानी पर्न सक्छ।
यदि तरलमा साना दागहरू देखा पर्छन् भने, कुहिरो वा धुवाँको आशा गर्न सकिन्छ, जबकि हिउँको लागि, यो आइपुग्छ (राम्रो मौसममा) कि त्यहाँ सानो सेतो, प्वाँख जस्तै प्वाँखहरू हुनेछन् जुन कहिलेकाहीं बरफ बनाउँछ। यदि यी क्रिस्टलहरू स्पष्ट तरल पदार्थको सट्टा बादलको तरलमा देखा पर्छन् भने, हामीले चट्याङ वा आँधीको सामना गर्नेछौं। यी संरचनाहरूको सही व्याख्याले 24 देखि 48 घण्टा पहिले नै मौसम अवस्थाको भविष्यवाणी गर्न अनुमति दिनेछ।
Storm Glass को आविष्कारक
तूफान गिलासको आविष्कारक बाहेक, फ्रिट्ज रोय उहाँ पनि मौसम विज्ञान को विकास मा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। रोयल सोसाइटी द्वारा अधिकृत रूपमा, टेलिग्राम मार्फत लन्डनमा जानकारी पठाउन 24 मौसम स्टेशनहरूको नेटवर्क लागू गरिएको थियो। बिगलको दोस्रो यात्रा सुरु गर्दा, फिट्जरोयले उपलब्ध अक्षांश गणनाहरू समायोजन गर्न असंख्य ब्यारोमिटरहरू र 22 खगोलीय घडीहरू लगाए।
उहाँले वायुमण्डलीय मोर्चाहरू र तिनीहरूको चालहरू कल्पना गर्न मौसम नक्सा सिर्जना गर्नुभयो। तर उनको साँचो जुनून मौसम भविष्यवाणी गर्दैछ, जीवन बचाउन सक्छ भन्ने विश्वास। यसरी, उनले लन्डन अखबार द टाइम्सका सम्पादकहरूलाई उनीहरूको प्रकाशनहरूमा मौसम रिपोर्टहरू समावेश गर्न मनाए। यसैले, अगस्त 1, 1861 मा, इतिहासको पहिलो मौसम विज्ञान भाग प्रकाशित भएको थियो।
भविष्यवाणी र व्यवहार
वायुमण्डलमा परिवर्तनको कारण मिश्रणको उपस्थितिमा परिवर्तनको कारण, गिलासले हामीलाई स्थानीय, छोटो अवधिको मौसम पूर्वानुमान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि मौसम स्थिर, सुख्खा र घमाइलो हुने अपेक्षा गरिएको छ भने, गिलास अशुद्धताबाट मुक्त र स्पष्ट देखिन्छ। यदि यो बादल हुन्छ भने, यो बादल र सम्भावित वर्षाको संकेत हो। यदि त्यहाँ तरल भित्र साना दागहरू छन् भने, त्यहाँ धुवाँ वा धुवाँ हुन सक्छ।
स्पष्ट दिनमा, यदि तपाईंले सानो सेतो, स्पाइक-जस्तो प्वाँखहरू बरफको क्रिस्टल बनिरहेको देख्न थाल्नुभयो भने, सम्भावनाहरू छन्। मौसम बिग्रन्छ र यो अन्ततः हिउँ हुनेछ। अन्तमा, यदि यी उही क्रिस्टलहरू पारदर्शी हुनुको सट्टा बादलको तरल पदार्थको रूपमा देखा पर्छन्, यो आँधीको स्पष्ट हार्बिंगर हो - यसैले Storm Glass भनिन्छ।
कसरी एक तूफान गिलास बनाउने
Storm Glass बनाउनको लागि, तपाईंले नुन र कपूरलाई सही रूपमा तौल्नु पर्छ, र रक्सी र पानीको मात्रा मापन गर्नुपर्छ। तौल गर्दा, तपाईंले ०.०१ G को शुद्धताको साथ चिनियाँ गहना स्केल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम मापन गर्न तपाईंले स्नातक गरिएको सिलिन्डर वा नाप्ने ट्यूब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं यसको घनत्वमा आधारित तरल तौल गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं तुरुन्तै तयार कन्टेनरमा कपूर थप्न सक्नुहुन्छ उपकरण र अल्कोहल थप्नुहोस्, वा तपाईले यसलाई अल्कोहलको गणना गरिएको मात्राको 2/3 मा भंग गर्न सक्नुहुन्छ, एक तूफान गिलास कन्टेनरमा समाधान स्थानान्तरण गर्नुहोस् र बाँकी अल्कोहलसँग कुल्ला गर्नुहोस्। त्यसपछि नुनलाई पानीमा घोल्नुहोस्, नुनको घोललाई कपूरको घोलमा हाल्नुहोस् र समान रूपमा हलचल गर्नुहोस् (तपाईले कर्क बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई धेरै पटक घुमाउन सक्नुहुन्छ)। समाधान र तलको बीचमा केही हावा कर्क हुनुपर्छ। यस अवस्थामा, कपूर सेतो अवक्षेपणको रूपमा खस्नेछ, आन्दोलनको सुधारलाई संकेत गर्दछ।
त्यसपछि एक ढक्कन संग उपकरण बन्द गर्नुहोस् ताकि सबै हावा बुलबुले तैरने, दबाब बराबर गर्न तिनीहरूलाई केही समयको लागि खोल्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् र सीलर लागू गर्नुहोस्, र चिसो नभएसम्म यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। समाप्त भएको विन्डशिल्डलाई म्याट कालो पृष्ठभूमिमा ठाडो रूपमा फिक्स गरिनुपर्छ र झ्यालबाट टाढा नभई तताउने प्रणाली र अन्य तताउने उपकरणहरूबाट टाढा राखिएको हुनुपर्छ। लगभग एक हप्ता पछि, कपूर अवक्षेपण गाढा हुनेछ र अलग क्रिस्टल देखा पर्नेछ।
तपाइँ प्राय: गलत वा हानिकारक सुझावहरू वा भूलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। म ती मध्ये केही सूचीबद्ध गर्नेछु:
आँधीको गिलासलाई रबर स्टपरले ढाक्न असम्भव छ, जसले अनिवार्य रूपमा मिश्रणलाई पहेंलो बनाउनेछ, र जति लामो समय, रङ त्यति नै संतृप्त हुनेछ।
त्यसपछि प्लगको साथ उपकरण बन्द गर्नुहोस्, सबै बुलबुले फ्लोट गर्न अनुमति दिनुहोस्, दबाब बराबर गर्न एक क्षणको लागि खोल्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् र सीलर लागू गर्नुहोस्, चिसोमा हटाउनुहोस्।
समाप्त भएको Storm Glass लाई म्याट कालो ब्याकग्राउन्डमा ठाडो स्थितिमा राख्नु पर्छ र झ्यालबाट टाढा नभई तताउने प्रणाली र अन्य तताउने उपकरणहरूबाट टाढा राख्नु पर्छ। लगभग एक हप्ता पछि, कपूर अवक्षेपण गाढा हुनेछ र अलग क्रिस्टल देखा पर्नेछ।
यो मिश्रण संग कन्टेनर सील गर्न आदर्श छ, यदि यसलाई सील गर्न असम्भव छ भने, तपाइँ स्नेहन बिना ग्राउन्ड गिलास स्टपर, वा फ्लोरोप्लास्टिक / पोलिथिन स्टपर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, स्टपरले कन्टेनरको पूर्ण कसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ, यसलाई अन्तमा इपोक्सी रालको साथ ठीक गर्न सुविधाजनक छ, यसलाई लागू गर्दै। टोपीको शीर्षमा मोटो हुने चरणमा।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले Storm Glass र यसको विशेषताहरू बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » तूफान ग्लास